Mitendry Milina i Torkia…. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Novambra 2017 3:18 GMT
Fiarahabana taona vaovao! Te-hanitatra ny fiarahabany Taombaovao ihany koa i Yogurtland, Turkish Torque, sy Talk Turkey. Raha mankalaza ny taombaovao ao Istanbul ianao androany alina, maro ireo bilaogera Tiorka miresaka momba ny fampisehoana nataon'i Woody Allen sy ny Tariny Jazz New Orleans.
Araka ny efa mahazatra, fotoanan'ny fandinihana ny faran'ny taona, ary manana andiana mozika i Undomondo: Hira Tsara Indrindra, Raki-kira Tsara Indrindra, Mpanakanato Tsara Indrindra, sy Famoahana Netlabel Tsara Indrindra. Ankoatra ny lohahevitra mozika, manana lahatsoratra mahaliana momba ny herin'i Elvis Presley sy ny Rock and Roll eo amin'ny kolontsaina Tiorka tamin'ny taona 1950 i Turkish Torque. Ary araka ny mahazatra, manana lahatsoratra ahitana rohy ho an'ireo liana te hianatra ny teny Tiorka mba hahatakarana bebe kokoa ny kolontsaina Tiorka ny bilaogy mitantara ny mozikan'ny kintana Tiorka Tarkan, Tarkan Deluxe.
Tsy isalasalana fa ireo izay nanaraka ny vaovao Tiorka dia naheno momba ny fitsarana an'i Orhan Pamuk noho ny faniratsirana ny maha-Tiorka, raha nesorina kosa ny sasany tamin'ireo fiampangana azy, dia mbola hitohy ny fitsarana. Nolazaina fa maherifon'ny lliteratiora i Pamuk, ary vao haingana izy no namoaka lahatsoratra ho an'ny New Yorker momba ny fitsarana azy. Mazava ho azy fa mbola manohy ny adihevitra momba ny maha-Tiorka ity fitsarana ity, anisan'izany ny resaka Kiorda ao Tiorkia sy Avaratr'i Irak.
Fanamarihana kely vitsivitsy: Metroblogging: Istanbul manoratra mikasika ny trano fonenana any Istanbul. Talk Turkey manoratra momba ny herim-pitaomana Tiorka ao amin'ny lahatsoratr'i Narnia. Mavi Boncuk kosa manana vaovao momba ny Leoparda Anatoliana.
Amin'ny andalana farany amin'ny taona (ary manantena aho fa manana andro fialantsasatra mahafinaritra sy voaaro ianao) hamela rohy mankany amin'ny lahatsoratry Amerikan Turk mitondra lohateny hoe “Got Milk (Mahazòa ronono)” ho anao aho.